November | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya November 29, 2017	Leave a comment 209 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waa RW hore ee dalka Turkiga, Adnan Menderes. Intii u dhaxaysay 1950-kii iyo 1960-kii ayuu ahaa RW kaas oo saddex jeer oo xiriir ah ku guuleystay doorashada. Wuxuu aad ugu nuglaa ilaalinta dhaqanka iyo akhlaaqda Islaamiga in lagu dhaqmo marka lala barbar-dhigo helihii Calmaaniyadda Turkiga: Ataturk, Kemal Pasha. Wuxuu 50-meeyadii u ol’oleeyey sharciyeynta Aadaanka Salaadda – yacni ...
Zakariya November 29, 2017	Leave a comment 312 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Milkiilaha dameero ku nool Hindiya ayaa la yaab sunniyaha la taagay markii loo sheegay in boolisku ay xabsiga u taxaabeen dameeradiisa kadib markii ay cuneen caleemo. Kamlesh oo ku nool Utter Pradesh ayaa sheegay inuu u baxay raadinta dameeradiisa markii uu miriqdooda waayay. Tirada dameeradiisu waxay gaarayeen 8. Kadibna wuxuu ogaaday inay ku jiraan xabsiga Urai ee degmadiisa. ...
Zakariya November 29, 2017	Leave a comment 291 Views
Muqdisho – Gabar ayaa gebi ahaanba dunida isaga quusatay markii saaxiibkeed uu sawirradeeda oo qaawan uu soo dhigay baraha bulshada, marka loo eego booliska Brazil. Booliska Nova Andradina ayaa sheegay inay sameeyeen baaritaan kadib markii 15-jir lagu magacaabo Karina Saifer Oliveira la arkay iyada oo ku meyday gurigeeda. Aabaheed, Aparecido Oliveira ayaa sheegay inuu inantiisa kala hadlay sawirradeeda qaawan ee lasoo dhigay ...
Zakariya November 28, 2017	Leave a comment 253 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waxaa maanta furmay aqoon-is-weydaarsiga sanadlaha ee cilmi-baarista Soomaaliyeed oo uu soo qaban-qaabiyay Machadka Cilmi-baarista Soomaaliyeed. Kani waa sanadkii saddexaad oo Machadku uu qabto cilmi-baarista. Wuxuuna socon doonaa muddo saddex maalmood ah. Isaga oo qeyb ka ah Jaamacadda Muqdisho, Machadku wuxuu labadii sano ee hore sidan oo kale usoo qaban-qaabiyay madasha cilmi-baarista Soomaaliyeed. Hal-ku-dhegga sanadkan ayaa ah: Adkeysiga iyo ...
Garasho la’aanta Soomaalida iyo Gacan-bidixeynta reer Galbeedka.
Zakariya November 28, 2017	Leave a comment 630 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Dood badan kama taagna in dalkan uu ka dhacay burbur iyo bara-kac xoogan bilawgii 1991-kii, markii la dumiyey nidaamkii milatariga. Hayeeshe waxaa lagu kala qeybsan yahay aragtida ah sababtii loo riday dowladdii Milatariga ee Jaalle Siyaad. Dunidan waji walba waxaa horyaalla mid kale wax walbana waa labo labo, dabcan haddii ay dad ku doodayaan dalkan iyo dowladdiisii ...
Zakariya November 28, 2017	Leave a comment 301 Views
Lagos (Himilonetwork) – Munaasabad laba maalinle ah oo ay qabatay Akadeemiyadda Fidinta Dacwada Islaamka ee Nigeria ACADIP ayaa kusoo idlaatay guul kadib markii 82 qof oo Masiixi ah ay kusoo Muslimeen. “Taariikhdeenna dacwada aan wadnay muddo 23 sano ah waa markii ugu horreysay oo dhacdadan oo kale ay nasoo marto – halkaas oo tiro badan ay wadar-wadar kusoo Muslimeen,” ayaa lagu ...
Dhalinyarada – Kheyraadka lagu taabba-geliyo ilbaxnimada Umadaha.
Zakariya November 26, 2017	Leave a comment 255 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Heerka bacriminta ama dhalmada waa aas-aaska gunta ah ee mujtamaca. Sanadkii 1947-kii laba sano kadib dagaalkii labaad ee adduunka, haweeneyda Japan waxay dhali jirtay 4.7 carruur ah. Bilowgii qarnigan tiradaas waxay isku soo dhintay si hooseysa halkaas oo haweeneydiiba hadda ay dhasho 1.3 carruur. Markii uu dhamaaday dagaalkii labaad, Japan waxay kamid ahayd dalalkii ku jabay ee ...
Zakariya November 26, 2017	Leave a comment 179 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Muuqaal fiidiyow ah oo muujinaya nin Muslim ah oo ku tukanaya dhinaca waddada gasha xeebta Sydney ayaa ku baahay baraha bulshada. Isaga oo Daily Mail kala hadlayay muuqaalka, madax-weyne ku-xigeenka Golaha Islaamiga ee Victoria, Adel Salman wuxuu yiri; “Waxaan ku tukaday waddooyinka marar badan, baakiinada, gegida dayuuradaha iyo xittaa garoomada kubadda cagta.” “Waxaan tukanaa shan waqti maalin ...
Zakariya November 26, 2017	Leave a comment 270 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Murugyahan shaabadaysan: leh gar weyn ma ahan nuuca Muslim uu qofku ka filan karo inuu kula kulmo masjidka. Hayeeshe Robbie Maestracci, burcad-hore kaas oo hadda xubin ka ah ururka horumarinta dhalinyarada ee Masjidka Holland Park Mosque ayaa sidaas ka dhigan. “Waxaan helay taariikh danbi, waana u xirmay,” Maestracci ayaa u sheegay Daily Mail. “Aad baan ugu faraxsanahay ...
Zakariya November 25, 2017	Leave a comment 177 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Wasiirka Dhaqaalaha Turkiga ayaa maalintii Khamiista ku dhawaaqay in dowladdiisu ay qorsheysay furitaanka hey’addii ugu horreysay ee shati u heysata cunnooyinka xalaasha ah si loo xoojiyo heerka ugu sarreeya nolosha 1.8 bilyan oo Muslimiinta dunida ku nool ah. “Baahida tira-weynaha Muslimiinta adduunka ay u qabaan wax-soo-saarka Xalaal ah waa mid baahaysa, ayuu Nihat Zeybekci u sheegay Anadolu ...
La kulan: Ninka dhiiggiisa ku badbaadiyay nolosha 2-malyuun oo caruur ah
Dhaqaalaha Japan oo u baahan dhalista caruur badan
Ronaldo oo 1.5 milyan ugu deeqay Carruurta Falastiin.